Nkwadebe maka Keltepe Ski Center | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region78 KarabukKeltepe Ski Center Na-akwado Maka Oge Udu mmiri
01 / 05 / 2020 78 Karabuk, Central Anatolia Region, Foto, General, Isi akụkọ, Turkey, TELPHER
Kaltepe s ebe etiti na-akwado maka oge udu mmiri
Gọvanọ Karabük Fuat Gürel nyochara akụrụngwa na ọrụ ịgbasawanye okporo ụzọ nke ndị otu Pọtugal Special Special butere n'okporo ụzọ Keltepe Ski Center ma nata ozi n'aka ndị ọchịchị.
N’ikwu na ihe a ga-eji rụọ akụrụngwa na ọrụ mgbasawanye okporo ụzọ bụ site n’aka igwe eji ekwu okwu na okwute dị na Mpaghara Brasslik, Odeakwụkwọ Ọchịchị na Ọchịchị Mịnịsta nke Ochichi bụ Mehmet Uzun nyere Gọvanọ Fuat Gürel ozi banyere ọrụ ndị ahụ.
Gọvanọ Gürel, onye na-eduzi nnyocha na Keltepe Ski Center Sub-Day Facilities, gwara onye odeakwụkwọ ukwu nke Ọchịchị Nchịkwa Ọpụrụiche Mehmet Uzun na Onye Isi Nduzi nke Ndị Ntorobịa na Egwuregwu Coşkun Güven iji kwadebe akụkọ ga-ekwe omume site na ịme ihe ọmụmụ dị mkpa maka mgbasawanye nke ebe a na-adọba ụgbọala, na-ewu ụlọ mposi na masjids.
Gọvanọ Gürel, onye mere nyocha dị mkpirikpi mgbe nyochachara ahụ; Anyị tinyere Keltepe Ski Center ka ọ bụrụ ọrụ ụbọchị-ọrụ n'oge udu mmiri n'oge gara aga, ọ nọkwa na nnukwu ihe site na mgbe anyị tinyere ya. N'ihe banyere njem nlegharị n'oge oyi, o gosipụtara njirimara nke ịbụ ihe owuwu kachasị ọhụrụ na mpaghara anyị, anyị na-anabata ndị ọbịa site na mpụga mpaghara na obodo ndị gbara ya gburugburu. Anyị ga-akwadebe asphalt maka akụrụngwa nke 4km, 1.5 km n'ozuzu, nke anyị na-enweghị ike ị nweta asphalt n'ihi mgbidi anyị wuru n'obodo ahụ na-aga n'okporo ụzọ 5.5 kilomita anyị gbasaa n'afọ gara aga. Ndị otu njikwa ọrụ anyị pụrụ iche na-akwadebe akụrụngwa nke okporo ụzọ ahụ. Mgbe emechara ihe ndị a, anyị ga -emepụ sọlfọ nke okporo ụzọ ahụ ma tinye ya n'ọrụ.
Enwere m nnọọ mmasị n’ọrụ a anyị rụrụ n’oge ihe isi ike ndị a. Ka anyị ji ike anyị niile na-ebuso ọrịa coronavirus ọgụ, anyị na-esokwa ọrụ anyị ma na-arụ ọrụ na ha. Anyị bụ obodo siri ike, mba siri ike. Ka anyị na-alụ ọgụ ọgụ n’otu aka, anyị na-esokwa ọrụ a ga-arụ n’obodo anyị niile. Ọ bụghị naanị na anyị na-ejikọ ebe anyị na-aga Ski na njem nlegharị oyi, kamakwa otu anyị nwere ike isi jiri ya mee ihe n’oge niile. N'otu oge ahụ, anyị na-eme atụmatụ iji gbochie nsogbu ndị anyị nwetara n'oge gara aga ma ụmụ amaala anyị kọọrọ ya.
Ọ ga-amasị m ikele ndị nnọchi anya anyị na-agbaso ego a ga-eme n'obodo tupu ndị minista, ndị isi anyị na ndị otu ha na ndị isi ha na ndị ọrụ nke Ọrụ Nchịkwa Anyị. Ọ ga-amasị m ikele ndị MP na ndị ọrụ anyị bụ ndị nyere aka na owuwu nke Keltepe Ski Center site na echiche echiche ruo na nke a. N’eche, anyị ga-eme ka ezi akụ na ụba na obodo anyị ọnụ. ” o kwuru okwu.
Gọvanọ Fuat Gürel sooro ya na onye odeakwụkwọ ukwu nke ndị isi nchịkwa mpaghara pụrụ iche, Mehmet Uzun na onye isi ndị ntorobịa na egwuregwu Coşkun Güven.
Cıbıltepe Ski Center na-akwadebe maka oge ski
Yildiz Mountain na-akwadebe maka oge ski ọhụrụ
Erciyes Na-akwadebe maka Oge ski
Mountain Yıldız na-akwadebe maka oge ski ọhụrụ
Salda Ski Center kwadebere maka oge oyi
Mee 114, ụbọchị ọrụ na ịdị n'otu na-eme ememe na İzmir n'otu ebe Mgbe afọ 1 gasịrị
Njem nleta Onyenwe anyị maka Tokat Ski Resort